Umthandazo kwiVirgen del Carmen. ? Kumatyala anzima kunye noKhuselo
Umthandazo kwiNtombi Enyulu ukusuka kuCarmenAkukho meko inzima ayinakusonjululwa ngesivakalisi nakwimeko le umthandazo kwintombi kaCarmen Sisicwangciso esiliqili sokubonisa ukuba amaxesha ngamaxesha kufuneka sijongane nemini, kuba asazi ukuba leliphi ixesha apho kuya kufuneka siphile into enzima kwaye kulungile ukuthintelwa.
Umthandazo sisixhobo esinamandla esinokusisebenzisa nangaliphi na ixesha sifuna okanye sisifuna.
Le ntombi igqalwa njengonqwenelekayo kwaye oku kungenxa yokuba iyimimangaliso kwaye iimpendulo ziqala ukubonwa kwimizuzu embalwa emva kokuba uthandazile, oku kunjalo kwimeko ezininzi.
Ukwazi ukuba sinomntu ezulwini osasiqondayo kwaye onokusikhuthaza nakweyiphi na imeko kusizalisa ngoxolo nokuzithemba ukuba yonke into iza kulunga.
1 Umthandazo kuVirgen del Carmen Ngubani uVirgen del Carmen?
1.1 Umthandazo kwiVirgen del Carmen yamatyala anzima
1.2 Umthandazo weVirgen del Carmen wokukhanyiselwa kunye nokukhuselwa
1.3 Umbulelo kunye nomnikelo
1.4 Umthandazo kaVirgen del Carmen wokufikelela eluthandweni
Umthandazo kuVirgen del Carmen Ngubani uVirgen del Carmen?
Yaziwa njenge Inenekazi lethu leCarmen, ngomnye weengcebiso ezinikwe kwiNtombi Enyulu uMariya. Igama lazo livela kwiNtaba yeKarmele kwaSirayeli, intsingiselo yayo iyiGadi.
Kwamanye amazwe uthathwa njengongcwele wolwandle kunye nakwamanye, njengaseSpain, uthathwa njengomgcini oyingcwele we-Spanish Armada. Kuyatshiwo ukuba ngo-1251 le ntombi inyulu yavela kwi-Saint Simon Stock eyayingumphathi jikelele we-Order.
Koko kudibana nendoda yanikwa isaphulelo kunye nemikhwa yayo, iisimboli ezimbini zento eyaziwa njengehlelo likaMarian leKarmele emhlabeni jikelele.
Ukuzinikela kwiNtombi Enyulu uMariya lisiko lecawa yama Katolike ebalaselisa ukubaluleka kwentombi ekufikeni kweNkosi yethu uYesu Krestu njengemilo yendoda kulomhlaba.
Isixhobo sikaThixo uBawo ukuzalisekisa iinjongo zakhe ukuza kuthi ga namhlanje.
Umthandazo kwiVirgen del Carmen yamatyala anzima
Ndinobunzima obungamawakawaka: ndincede.
Kwintshaba yomphefumlo: Ndisindise.
Kwiimpazamo zam: ndikhanyisele.
Ekuthandabuzekeni kwam kunye nosizi: ndixelele.
Kwizigulo zam: ndomeleza.
Xa bandicekisayo: Ndivuyele.
Ngamaxesha anzima: ndithuthuzele.
Ngentliziyo yakho kamama: ndithande.
Ngamandla akho amakhulu: Ndikhusele.
Kwaye ezingalweni zakho xa iphelelwe: Ndamkele.
Ntombi yaseCarmen, sithandazele.
Njengomama, iNtombi enyulu uMariya uyazi ukuba yeyiphi intlungu ukuba umntu othandekayo ekwimeko eyingozi.
Ufanelekile kwaye unegunya lokuthethelela iimfuno zethu phambi koMenzi wazo zonke izinto.
Imithandazo eyenziwe ngokholo olusuka emphefumlweni iyasebenza, asinakubuza ukuba asikholelwa na ukuba ummangaliso esiwulindeleyo ungasinikwa, nokuba kunzima kangakanani kuthi ukuba oku kunokwenzeka, khumbula ukuba xa sithandaza kungenxa yokuba Sicela into enokuthi ifezekiswe kuphela ngendlela yendalo.
Umthandazo weVirgen del Carmen wokukhanyiselwa kunye nokukhuselwa
OyiNtombi enyulu yaseCarmen! Umama weNkosi yethu uYesu Kristu kunye nomkhuseli wabo bonke abanxiba i-scapular yakho engcwele.
Namhlanje ndithandaza ngaphambi kwengubo yakho enobubele ukuba usoloko undikhanyisela Kwiindlela ezimnyama kobu bomi ndinokuphambuka kuzo ngaphandle kwesandla sakho sokunceda.
Ndixolelwe zonke izono zam ndiyakuvuma kakhulu kwaye ndiyakuhlonipha imihla ngemihla. Sukundishiya ngexesha lokuxakeka. Ngaphandle koncedo lwakho bendizakuba yimvu engenandlela.
Ukucela ukukhanya kunye nokukhuselwa kuthi, kwilungu losapho okanye kubuhlobo obukhethekileyo akuyonto intsha.
Ngapha koko kuthathwa njengesinye sezicelo ezihlala rhoqo emva kwemimangaliso yezempilo.
Kuyinto eqhelekileyo ukuziva ungakhuselekanga okanye usengozini kwilizwe apho kubonakala ngathi ububi bunyukile kwaye kungenxa yoko le nto ukuphakamisa isicelo sokuthandaza kuVirgen del Carmen okanye nawuphi na omnye umsizi onokusinceda kungummangaliso wokwenyani.
Umbulelo kunye nomnikelo
OyiNtombi eNgcwele yaseCarmen!
Asinakuze siphendule ngesidima kwezothando kunye nombulelo osinike wona ngokusinika isikhumbuzo sakho esingcwele.
Yamkela into yethu elula, kodwa inentsingiselo enzulu, enkosi kwaye, kuba akukho nto singakunika yona ekufaneleyo wena kunye neemfesane zakho.
Sinikela ngeentliziyo zethu, ngothando lwayo lonke, nangobomi bethu bonke, esifuna ukubusebenzisa kuthando nakwinkonzo yoNyana wakho, iNkosi yethu, nasekusasazeni ukuzinikela kwakho okumnandi ...
Sifuna ukuba bonke abazalwana bethu elukholweni, abanikwe nguThixo ukuba baphile kwaye banxibelelane, basixabise kwaye basibulele isipho sakho esikhulu, sinxibe i-Scapular eNgcwele, kwaye ukuba sonke singaphila kwaye sife kuthando lwakho nokuzinikela.
Ngaba uyithandile intombi yeCamen yomthandazo wokubulela nokunikezela?
Amaxesha amaninzi siyayilibala imithandazo xa sele sifumene into ebesiyicelile kodwa oku akufuneki kube njalo.
Ibhayibhile ibalisa amabali abantu abangabonisanga mbuyekezo kunye nabanye abaye babulela.
Ngokunjalo nezinto esizenzayo, siyalibala yonke into xa sinayo le nto besiyifuna.
Ukuthandaza ngombulelo sisenzo esingahambiyo ezulwini. Xa sisenza izinto kwaye singazifezi, sikwabonisa esibhakabhakeni.
Nokuba kuthatha ixesha elingakanani ukubulela okanye ukunika into oyithembisileyo, into ebalulekileyo kukwenza.
Umthandazo kaVirgen del Carmen wokufikelela eluthandweni
Owu Ntombi yaseCarmen, UMariya Oyingcwele!
Sisidalwa esihle kakhulu, olona lubalaseleyo, olucocekileyo, oluhle kakhulu kwaye lungcwele konke.
Owu, ukuba wonk 'umntu uyazi, Ntombazana noMama, ukuba wonke umntu uyakuthanda njengoko kufanelekile!
Kodwa ndiyathuthuzeleka kuba imiphefumlo emininzi esisikeleleyo ezulwini nasemhlabeni ihlala ithanda ngokulunga nobuhle bakho.
Kwaye ndivuya ngakumbi kuba uThixo uthanda wena wedwa ngaphezu kwabo bonke abantu kunye neengelosi kunye.
Mhlekazi wam onothando, mna, soni esonakeleyo, ndiyakuthanda, kodwa ndiyakuthanda kancinci xa kuthelekiswa nento ekufaneleyo; Ndifuna, ke ngoko, uthando olukhulu ngakumbi nangakumbi kuwe, kwaye oku kuya kufuneka ufikelele kum, kuba ukuthanda wena uthwele iScapular yakho eNgcwele luphawu lokumiselwa kwangaphambili kozuko, nobabalo oluvela kuThixo kuphela abo bafuna ngempumelelo ukugcina.
Wena ke, ukuba ufikelele kuyo yonke into evela kuThixo, ndenzele olu lubabalo: Intliziyo yam ingavulela eluthandweni lwakho, ngokokundithanda kwakho. Ukuba ndikuthanda njengonyana oyinyani, kuba undithanda ngolona thando lukhulu lukaMama, ukuze, ukuhlangana nawe ngenxa yothando apha emhlabeni, andizukuhlukanisa nawe kamva ebomini banaphakade.
Lo mthandazo kuVirgen del Carmen ukufikelela uthando lwayo womelele.
Ukufumana uthando lokwenyani yinkxalabo ehlala ihleli kubomi bethu, ngakumbi xa iminyaka ethile sele ifikelelwe okanye xa uhlala ungatshatanga emva kokuba uhlala isibini kangangexesha elithile.
Ngendlela efanayo lo mthandazo uyasebenza kwiimeko apho ukufumana iqabane kumele inqanaba elithile lobunzima okanye kwiimeko apho kunzima kakhulu ukuwa luthando okanye ukoyisa umntu, le mithandabuzo yokufumana okanye ukufikelela eluthandweni lwabo.
Khumbula ukuba izixhobo zokomoya zinamandla kwaye asinakukwazi ukuzihoya nokuba asazi ukuba zisebenza njani, sisicwangciso esinamandla esinokuthi sisisebenzise ngexesha esilifunayo ngokholo nangokuqiniseka ukuba lo mthandazo uza kuphendulwa ngamandla.
Unokuthetha izivakalisi ezi-4 ngaphandle kwengxaki.
Zonke zilungile, ukucela uncedo kunye ne-axulio kwaye akulunganga ukwenza oko ngaphezulu kwesihlandlo esinye.
Thatha ithuba lamandla omthandazo kwiNkosazana yaseCarmen ukutshintsha ubomi bakho.